Nwee mmụọ nsọ site n'ịchịkọta ego ndị ọzọ - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Nchịkọta ego na ihe omume > Nweta mmụọ nsọ site n'ịchịkọta ego ndị ọzọ
Ọ na-eju anyị anya mgbe niile otú ndị mmadụ ga-esi na-akwado ọrụ anyị. Ma ọ bụ £5 sitere na ire achicha ụmụaka ma ọ bụ £ 5,000 sitere na bọọlụ ọrụ ebere, onyinye ọ bụla na-eme nnukwu ihe dị iche ma na-enyere aka ịkwado ọrụ anyị dị mkpa.
Mgbalị marathon Hugo
Hugo Cohn mere na Marathon Thames Meander na Nọvemba afọ gara aga iji nweta ego maka anyị Bromley Dementia Nkwado Hub mgbe ọ kwadoro nne nke ezigbo enyi ya Becky.
Ọ na-ekwu, sị: “Ebe Dementia Hub bụ nkwado buru ibu nye Becky, bụ́ onye e chọpụtara n’ụzọ dị mwute nne ya nwere nkwarụ mgbe ọ ka dị obere. Ebe ndị ezinụlọ m na-arịakwa mgbaka, ọ na-abụkarị ihe na-akpatara m obi, ọ bụkwa ihe ùgwù iweta ego maka otu ọrụ ebere obodo nke nyeere enyi m na ezinụlọ ya aka nke ukwuu.”
Hugo kpebiri ịgba ọsọ marathon bụ ụzọ kacha mma isi nweta ego mgbe ahụhụ na-agba ọsọ tara ya n'oge mkpọchi. Ọ na-ekwu, sị: “Agbala m ọsọ n'ụzọ nkịtị ruo afọ ole na ole, ma n'oge mkpọchi, achọpụtara m na ọ bụ ụzọ dị mma isi mebie ikuku ma nweta ikuku dị mma nke ukwuu. Ịgba ọsọ emeela ihe dị ebube maka ahụike uche m na m na-agwa onwe m mgbe niile 'Ọ na-adị gị mma mgbe ị gbasịrị ọsọ' dị ka ụzọ isi manye onwe m pụọ n'ọnụ ụzọ."
N'ịbụ onye nkwado o nwere n'ụbọchị ahụ kwadoro, Hugo mezuru ihe omume ahụ n'ime awa atọ dị egwu na nkeji 52. "Enwere m nnukwu igwe mmadụ n'ọsọ ahụ (ndị na-akwado Hugo na-ese foto n'okpuru ebe a) ma ha mere ka m na-aga mgbe m na-agbasi mbọ ike na njedebe."
Mgbe ọ gbasịrị mbọ ya nke ukwuu, Hugo so ndị enyi ya na ndị ezinụlọ ya rie nri ụlọ mmanya, mgbe ahụ ya na nwunye ya ga-aga spa n'izu ụka sochirinụ.
O nwere ekele dị ukwuu nye ndị niile kwadoro ya, ọkachasị ndị nyere nkwado ha n'ụbọchị ahụ.
“Ọ ga-amasị m ịkele onye ọ bụla nyere onyinye maka ihe a kwesịrị ekwesị, yana ndị biliri n'isi ụtụtụ oyi oyi na November iji kwado m. Onye ọ bụla m gwara okwu nwere akụkọ nke ya gbasara etu mgbaka siri metụta ndụ ha n’ihi ya, ọ dị oke mma ịpụ ebe ahụ wee nweta ego ga-enyere ndị bi n’obodo ahụ aka, bụ́ ndị ga-enwe nsogbu nke mgbaka.
“BLG Mind bụ ọgbakọ mara mma na-enyere ọtụtụ mmadụ aka na ọkwa mpaghara. Ahụla m otú ha si nyere otu ezigbo enyi m na ezinụlọ ya aka mgbe ha nọ n'ọnọdụ siri ike ma na-ewe iwe. Ụzọ ha si emepụta mmekọrịta onwe onye dị otú ahụ na obodo ha na-akwado dị ịtụnanya ịhụ na nke a dị oke mkpa dịka mmetụta nke Covid na mkpọchi ka na-enwe mmetụta nke ndị mmadụ na-enwe mmetụta nke ịnọpụ iche.
"Ịkwalite ego maka BLG Mind ga-enyere ha aka ịpụ na ịkwado ọtụtụ ndị ọzọ."
Hugo welitere £1,665 nke, na ego egwuregwu sitere na ụlọ ọrụ ya, wetara £3,330 dị egwu na mkpokọta maka Bromley Dementia Hub.
"BLG Mind bụ nzukọ dị egwu nke na-enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka na ọkwa obodo. Ahụla m ka ha si nyere ezigbo enyi m na ezinụlọ ya aka mgbe ha nọ n'ọnọdụ siri ike na nke na-ewe iwe."
Jane welitere £925 dị ịtụnanya wee nweta otu n'ime nnukwu ebumnuche ya.
Jane kwuru, sị: “Ka m na-erute ụbọchị ọmụmụ dị ịrịba ama, ekpebiri m na ọ ga-amasị m imezu otu n'ime nnukwu nrọ m nke ije ije na n'ime nke a na-enwetakwa ego maka ọrụ ebere obodo, Bromley, Lewisham & Greenwich Mind. Ahọọrọ m BLG Mind ka ha na-akwado ma papa m na onwe m mgbe ọ na-arịa ọrịa mgbaka. "
Natalie Payne bụ onye ọrụ afọ ofufo nke chepụtara bọọlụ afọ ebere na-aga nke ọma na enyemaka nke BLG Mind afọ atọ na-agba ọsọ, na-ebuli ihe dị ka £ 5,000 na mmemme ọ bụla.
“N’ịbụ onye dara mbà n’obi ọtụtụ afọ ma nweta nkwado dị ịtụnanya site na BLG Mind, ana m ejide Bọọlụ ahụ iji bulie ego n’olileanya na ọ dịkarịa ala, otu onye ọzọ nwere ike ịnweta otu nkwado ahụ n’oge mkpa ha.
Nweta ajụjụ nnakọta?
Were BLG Mind were ihe ịma aka dị oke egwu